तथ्या That्कले तपाईंलाई अझ बढि इन्स्टाग्राम लाइक र पछ्याउँदछ Martech Zone
केही हप्ता अघि, जेन लिसाक डेभसँग बोले - जसलाई पनि चिनिन्छ केविकि - दृश्य संचार रणनीति अनलाइन को बारे मा। यदि तपाईंले अनुसरण गर्नुभएको छैन भने केविकि… उसको खाता अनुसरण गर्नुपर्छ। उहाँ एक मिलियन अनुयायीहरूको एक चौथाईको नजिक हुनुहुन्छ र उहाँले दैनिक अनलाइन राख्नुहुन्छ अविश्वसनीय दृश्य कार्यले तपाईंको सास टाढा लैजानेछ। डेभ कसरी इंस्टाग्राममा संलग्न गर्न को एक महान उदाहरण हो! उनको संलग्नताको प्रयासले उसलाई विश्वभरि काम गरिरहेको छ।
अवश्य पनि, म दान जाररेलाको लामो समय प्रशंसक हुँ, जसले प्राय: डाटा पोष्ट गर्दछ जुन डाटामा भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रदान गर्दछ। म प्रायः उनका उदाहरणहरूलाई निष्कर्षहरू भन्दा धेरै प्रश्नहरूसहित छोडिदिन्छु - र म विश्वास गर्दछु कि उसले वास्तवमा हासिल गर्न खोज्दछ।
मैले भर्खरै केही समय ईन्स्ट्राग्राम डाटाबेस स collecting्कलन गर्न र छविहरूको काम गर्ने (वा कार्य नगर्ने) सुविधाहरूको पहिचान गर्न यसको विश्लेषण गर्न समय खर्च गरें। परिणाम तल इन्फोग्राफिक हो। यदि तपाईं डाटासेटको नर्डी विवरणहरूको बारेमा उत्सुक हुनुहुन्छ भने, यसको तल तल विवरणहरू छन्। डान जररेला, इन्स्टाग्रामको विज्ञान
केहि निष्कर्षहरु एकदम चाखलाग्दो छन् ... जस्तो कि अत्यधिक परिमार्जित छविहरु फरक इन्स्टाग्राम फिल्टर प्रयोग अधिक वा कम ध्यान प्राप्त गर्ने। वा अधिक ट्यागहरूको साथ सबमिट गरिएको फोटोले काम गर्दछ। कम वा कम जटिल फोटो बढी वा कम देखिने हो कि हैन। अँध्यारो वा लाइट छविहरू अधिक साझेदारी गरिएको छ वा छैन। वा चाहे वा नभए पनि तपाईंको वर्णनमा कल-टु-एक्शनको परिणामले थप मनपर्दोहरू प्राप्त गर्दछ। परिणामहरूले तपाईंलाई चकित पार्नेछ!
टैग: डान जररेलाइंफोग्राफ़कइन्स्टाग्रामइन्स्टाग्राम संलग्नताइन्स्टाग्राम निम्नानुसारइन्स्टाग्राम इन्फोग्राफिकइन्स्टाग्राम मनपर्दछइन्स्टाग्राम तथ्या .्कइन्स्टाग्राम रणनीतिहरूइन्स्टाग्राम दृश्यkewikiइन्स्टाग्रामको विज्ञान
सफल मोबाइल विज्ञापन रणनीति र अनुकूलन